ဘင်္ဂလီစစ်တမ်း (အပိုင်း ၁) ရေးသားသူ (ဝံသာနု ရက္ခိတ..) ~ ဒီမိုဝေယံ
(အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ် စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းကြတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ဓာတ်ပုံ Aye Chan)
ဒီဆောင်းပါး မဖော်ပြခင်မှာ နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့ မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့တဲ့ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြေဆိုခဲ့ပုံကို ကိုမောင်မောင်ဝမ်း ဘာသာပြန်ထားတာ ဦးစွာ ဖော်ပြလိုပါတယ်..။
As I said there isaproblem... about who we are referring to. There is someone who say that those people who claim to be rohingya are not the ones who are actually native to Burma. But who are just come over recently from Bangladesh.
But, on the other hand, Bangladesh says "no". They don’t want them as refugees because they are not native to Bangladesh and they come over from Burma. So how do we sort this out? Without rule of law, without proper Immigration processes, without proper policy, without appropriate implementation of the law. This is why I said the root of all this is the rule of law going back to many decades, not going back just to the crime that is just admittedacouple of months ago."
(သူတို့ (ရိုဟင်ဂျာ) တွေရဲ့နိုင်ငံသားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘာဖြစ်သင့်ပါသလည်း။ နိုင်ငံသားဟုတ်လား.. မဟုတ်ဘူးလား (ရှေ့က Citizenship ကို ရည်ညွန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်)
ဖြေ .ကျမ မသိဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့.. အခု ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီး ရှင်ပြောနေတာကို ကျမ မသိတာ။ ရှင် ဘယ်သူ အကြောင်း ပြောနေတာလည်းဆိုတာကိုက သေချာမှု မရှိလှဘူး. ကျမပြောခဲ့သလိုပဲ… ကျမတို့ ရည်ညွန်း ပြောဆိုနေတဲ့ သူတွေအတွက် ပြသနာတော့ရှိနေတယ်..။ ရိုဟင်ဂျာ ပါလို့ အခိုင်အမာပြောနေတဲ့ သူတွေကိုက မြန်မာနိုင်ငံဖွား ဇာတိချက်မြုတ်မှ မဟုတ်တာ။ သို့သော် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ကျော်ဝင်လာသူတွေက ဘယ်သူတွေလည်း။ တဘက်ကလည်း (ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ဆိုလိုသည်) မဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက သူတို့ကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် လက်မခံချင်ဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့ဟာ ဘင်္ဂလားနွယ်ဖွား ဇာတိချက်မြုတ်တွေ မဟုတ်ဘူး..။ မြန်မာပြည်က ကျော်ဝင်လာသူတွေတဲ့..။ ဥပဒေရဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေမပါပဲ..။
သင့်တော်တဲ့ လူဝင်မှု့ကြီးကြပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမပါပဲ၊ သင့်တော်တဲ့ မူဝါဒတွေမရှိပဲ..သင့်တော်မဲ့ ဥပဒေတွေကို အကောင်ထည်ဆောင်ရွက်မှု မရှိပဲ။ ဒီပြသနာတွေကို ကျမတို့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလည်း။ ဒါတွေရဲ့အရင်းမြစ် အကြောင်းတရားဟာ.. ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ နောက်ပြန်သွားနေတဲ့ အတွက်ကြောင့်ဆိုတာ ကျမပြောခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့လ အနည်းငယ်လောက်က ၀န်ခံထားခဲ့တဲ့ ရာဇ၀တ်ကြောင်းတွေ တင်ပြန်သွားခိုင်းနေတာ မဟုတ်ဘူးနော်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော အဓိကရုဏ်းကို ဘယ်သူတွေ ဘယ်သတင်းဌာနတွေက ဘယ်လိုဘဲ လိုရာဆွဲ အရောင်ဆိုးဆိုး ဒါဟာ လိမ်လည်ရန် အလွန်ဇက်ရဲတဲ့ လူမျိုးတွေရဲ့ အကွက်ကျကျ စီမံချက်ရှိရှိ လှမ်းလာတဲ့ ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဘဲ အရောင်ဆိုးဆိုး ဒီလူတွေဟာ ဘင်္ဂလီ မဟုတ်ပါဘူး ဒီအင်အေ DNA စစ်ကြကြေး စိန်ခေါ်ရင် အဲဒီဒေါ်လာဝါးပြီး အော်နေတဲ့ပါးစပ်တွေ ပိတ်ကုန်ပါမယ်။
(၁)ကနေ့ ဒီဘင်္ဂလီကုလိမ်တွေကို ရိုဟင်ဂျာလို့ ပေးစာကမ်းစာ မစို့မပို့ လေးစားပြီး တကျော်ကျော်နေတဲ့ BBC / VOA / RFA / DVB / Burma Campaign UK နဲ့ သူတို့နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေ အထူးသဖြင့် ဟန်ယောင်ဝေလေလေ စတဲ့အဖွဲ့အစည်း အားလုံးကို စိန်ခေါ်လိုပါတယ်။ ဒီဘင်္ဂလီကုလိမ်တွေကို ဘယ်လူမျိုးလဲဆိုတာ DNA စစ်ကြည့်ပါမယ်။ ဒီအလိမ်- ၁၀၀၀၀-သောင်းလောက် စစ်ကြည့်လို့ ၂၀-% မြန်မာတိုင်းရင်းသားသွေး (၂၅%) ပါတယ်ဆိုရင် မင်းတို့ အော်နေတာကို မှန်ပါတယ်လို့ ဒို့ဘက်က ၀န်ခံပါမယ်။ စစ်ကြည့်လို့ ဒီဘင်္ဂလီကုလိမ် ၂၀-% တောင်မပါဘူးဆိုရင် မင်းတို့ သက်ဆိုင်ရာဌာနမှာ ၀န်ချတောင်းပန်ပွဲ လုပ်ရဲပါသလား မေးချင်ပါတယ်။ မြန်မာလူထုကို ၀န်ချတောင်းပန်တာ လုပ်ကြေး စိန်ခေါ်ပါတယ် ။
(၂) ဒီလိုဘဲ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ တခြားအနောက် နိုင်ငံကြီးတွေကိုလဲ သူတို့နိုင်ငံမှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့မူကို ကျနော်တို့ နိုင်ငံအပေါ် ကျင့်သုံးဖို့ ဖိအားပေးချင်တဲ့စိတ်ကို ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အခုအမေရိကန်မှာကို သူတို့နဲ့ ခရိယာန်ဘာသာ ယုံကြည်မှုလဲတူတယ်။ သူတို့လို အနောက်ဥရောပကနေ ခရစ်နှစ် ၁၅၀၀-ခုနစ်ဝန်းကျင်က တချိန်တည်း အတူတူ အခြေချလာသူ အချင်းချင်း စပိန်နွှယ်ဖွား မက္ကဆီကိုနိုင်ငံသားတွေကို ဘာလို့ သူတို့ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံသား အဖြစ်တောင် မပေးနိုင်ဘဲ မြန်မာကိုတော့ ဗြိတိသျှတို့ရဲ့နယ်ချဲ့ ကျူးကျော်မှုကြောင့် အနိုင့်ကျင့် ကျူးကျော် ၀င်ရောက်လာတဲ့ ရာစုနစ် တစ်ဝက် (နှစ်-၆၀-)၀န်းကျင်သာရှိသေးတဲ့ သူတွေကို နိုင်ငံသားအဆင့်ကို ကျော်ပြီး တိုင်းရင်းသားပေးရမယ် ဖိအားပေးတာကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးနဲ့ ပြန်သုံးသပ်ပါဦးဘဲ ပြောလိုပါတယ်။ တခုမတူတာက အမေရိကန်မှာ စပိန်အနွှယ်ဘွား တရားဝင် အမေရိကန်နိုင်ငံသား လူဦးရေကိုက သန်း-၅၀-ကျော်ရှိနေပါတယ်။ ဒီဘင်္ဂလီတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ နယ်ချဲ့ရဲ့ ဆိုးကျိုးဖြစ်တာရယ် ဘယ်သူဘယ်လို သတ္တိရှိလို့ ငြင်းငြင်း ရုပ်ရည်နဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် သွေး ဒီအင်အေ စစ်ဆေးရင် တဖက်နိုင်ငံက ကုလားတွေ ဖြဲနေတာကို သိသိကြီးနဲ့ ကျနော်တို့နိုင်ငံက လက်ခံရမယ်ဆိုတာ လူကြီးလူကောင်း တဦးပြောသင့်သော စကားပင် မဟုတ်ပါကြောင်း ။
အမေရိကန်အနေနဲ့မြန်မာကိုဖိအားမပေးခင် မိမိကိုယ်တိုင် (၁) ဘာသာတူတယ်.. (၂) ဇာတိအတူတူ (၃) အခြေချလာချိန်အတူတူ (၄) ဘာသာရေးပြသနာ မရှိနိုင်သူ ဘာသာတူ .... မက္ကဆီကို လူမျိုးတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ် အရင်လက်ခံပြီးမှ You should take these immigrants as we did လို့ပြောပါ။ ခင်ဗျားတို့က လက်ခံနိုင်ရင်တောင် ကျနော်တို့က လက်မခံနိုသေးပါဘူး။ လက်မခံနိုင် သေးတယ်ဆိုတာ ဒီဘဂါင်္လိမ်တွေက ကျနော့်တို့ အိမ်ရှင်နိုင်ငံရဲ့ ဘာသာကို ပပျောက်အောင်လုပ်ရမယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရှာရိယာ ဥပဒေပြဒါန်းရမယ် ကြံရွယ်နေ လုပ်ဆောင်နေလို့ပါ။ ကျနော်တို့ကို ဖိအားပေးလာရင် ကျနော်တို့ကလည်း We are looking how you handle you handle your immigrants လို့ပြန်ဖြေရပါမယ်။ အဲဒီထက်ပိုဆိုးတာက နောက်ဆုံး သူ့မိခင်တိုင်းပြည် ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှကလို ဒုက္ခသည်အဖြစ် လက်ခံဖို့တောင် မသင့်တော်လို့ပါ။
မဟတ္တမဂန္ဒီကြီး စကားနဲ့ ပြောရရင် Be the change you wish to see in the world ......by Mahatma Gandhi.
၀ီလျှံ ၀ုဝါ့တ် စကားကိုးကားရရင် We should not have expectations of others regarding things that we are not prepared to carry out ourselves....ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင် မလုပ်ဆောင် နိုင်သောအလုပ်ကို သူပါးတွေကို လုပ်ပေးဖို့ မမျှော်လင့်ကောင်းပါဘူး။
ဒီလိုပြောရတာက ကျနော်တို့မှာ ခင်ဗျားတို့ (မြန်မာ) ကမှ လက်မခံရင် နေစရာ ပြေးစရာ မြေမရှိတော့လို့ပါလို့ တောင်းဆိုတာလာရင် ကျနော်တို့က ဗုဒ္ဓဘာသာ တိုင်းပြည်ပါ။ မေတ္တာ တရားကြီးများတဲ့ ဘာသာပါ။ လက်ခံဖို့ အဆင်သင့်ပါ။ အခုဟာက ရခိုင်နယ်မြေအားလုံးကို သူတို့နယ်မြေပါဆိုပြီး မြေပုံကြီးနဲ့ ဗြောင်လိမ် တောင်းဆိုလာတယ်။ ဒီနယ်မြေကို အစ္စလာမ်ဥပဒေနဲ့ အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးရမယ် တောင်းဆိုလာတာ သနားစရာ တစ်ကွက်မှ မရှိပါဘူး။ တိုက်ထုတ်ရုံမှတစ်ပါး လူသားချင်းစာနာစရာ တစ်စက်မှ မရှိပါဘူး။
အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေ ဘာညာအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံးကို ပြတ်ပြတ်ပြောပါမယ်။ ရခိုင်နယ်မြေကို သူတို့ ဘိုးဘွားပိုင်ခဲ့တာပါ လိမ်ပြောနေသမျှ ပါးစပ်နဲ့ ရှင်းလို့ မရတော့ဘူး သေနတ်နဲ့ ဘဲရှင်းဖို့ ရှိတော့တယ်။ ဘာလူ အခွင့်အရေးတွေ လာမပြောနေနဲ့။ လူအခွင့်အရေးဆိုတာ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက်ထားတဲ့ ဝေါဟာရ။ နယ်မြေလာ ကျူးကျော်ရန်စသူအတွက် မဟုတ်ဘူး။ နယ်ချဲ့လာသူ ဒို့ရန်သူဘဲ။ လူသားချင်းစာနာဖို့ လူအခွင့်အရေးတွေ လာမပြောနဲ့။ လာပြောသူဟာ အမျိုးသားသစ္စာဖေါက်ဘဲ။ ဒီဘင်္ဂါလိမ်တွေကို ဒီတောင်းဆိုချက် လိမ်ညာအော်နေတာ သူတို့ဘက်က အရင်ရပ်တန်းအောင်ကိုသာ သူတို့ကို အရင်ဆွေးနွေးပါ။ ဒီလိုအော်နေသမျှ ကျုပ်တို့ဘက်က ဒီနေ့မတိုက်ရင် နက်ဖန် ကိုယ်အသတ်ခံရဖို့သာ ပြင်ထားပေတော့။ သူတို့ အားသာတဲ့တနေ့ပြန်လာဦးမှာ။
ဒီလိုပြောတာ ရန်စကား မပြောသင့်ဘူး ပြောကြပါမယ်။ ပြောလို့ရပါတယ်။ တရက်ကျုပ်ပြောတာ မှားသလား မှန်သလား သမိုင်းကပြလာပါမယ်။ ဒါကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေက မရှင်းမလင်းဖြစ်နေသူဆိုရင် အဲဒီသူဟာ အမျှော်အမြင်နည်းသူလို့ ပြတ်ပြတ်ပြောတယ်ဗျာ။ ဒါမှမဟုတ် ဘာညာကို ငဲ့နေရသူဘဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ခေါင်းဆောင် မပီသသူလို့ဘဲ အပြတ်ပြောပါမယ်။
နောက်ဆုံးဗျာ ခင်ဗျားတို့ အမေရိကန်ကိုဝင်နေတဲ့ မက္ကဆီကိုလူမျိုးတွေနဲ့ ဒီကဘင်္ဂလီ အလိမ်တွေနဲ့ လူချင်းလဲပြီး လက်ခံရေး လုပ်မလားမေးရုံပေါ့။ ကျနော်တို့ ၂း၁ ချိုးတောင် လဲချင်ပါသေးတယ်ဗျာ။ ခိုးဝင်လာနေသေးတယ် အိမ်ရှင်ကိုကန်ထုတ်ပြီး သူတို့ပိုင်တဲ့ မြေပါ တကျော်ကျော်လိမ်ရဲသူတွေပါ။
တနေ့ကတင် (၁၆/၆/၂၀၁၂) သမ္မတအိုဘားမားက အဲဒီမက္ကဆီကန် တရားမ၀င် ၀င်ရောက်နေသူတွေထဲက အသက် ၁၄-နှစ်အောက် ရောက်လာပြီး လက်ရှိအမေရိကန်မှာ ပညာသင်ကြားနေသူ ပညာတတ်မြောက်နေသူတွေ အမေရိကန်စစ်တပ်မှာ တာဝန် ထမ်းဆောင်ဖူးသူတွေထဲက လူဥိးရေ-၈-သိန်းကို ၂နှစ်တာ (2-years) ပြည်နှင်တာ ဆိုင်းငံ့ (ဆိုင်းငံ့ရုံလေးနော်)ကို လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးတာ အဆင်မပြေလို့ သမ္မတအမိန့်နဲ့ အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီး ယာယီနေထိုင်ခွင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ ၂နှစ်-ပြည့်ရင် နောက်တစ်ကြိမ် သက်တမ်းတိုးရပါမယ်။ ယာယီနေထိုင်ခွင့်ကို လွှတ်တော်နှစ်ရပ်က မပေးနိုင်တာနော်။ သူတို့ကျတော့ ယာယီနေထိုင်ခွင့် တောင်မပေးနိုင်ဘဲ ကျနော်တို့ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံပေးရမယ် ဆိုတာကတော့ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူကြီးလူကောင်းစိတ် ပြည့်ဝသူတွေ မလုပ်သင့်တဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ကင်းမဲ့တဲ့လုပ်ရပ်ပါ။
( * ) သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် အနေနဲ့ ဒီတခါ အနောက်နိုင်ငံတွေကနေ နိုင်ငံသားပေးရမယ် တိုင်းရင်းသားပေးရမယ် တောင်းဆိုလာတဲ့ နိုင်ငံအားလုံးကို နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ စိန်ခေါ်လိုက်ပါလို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ အဲဒီလိုဖိအားပေးချင်တဲ့ နိုင်ငံတွေ အားလုံးက နိုင်ငံခြားရေ၀န်ကြီးတွေ ကိုယ်တိုင်လာခဲ့ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ ဒီဘင်္ဂလီကုလိမ်တွေကိုရော ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာပါ စာရင်းပေးထားတဲ့ ကုလိမ်တွေ အားလုံးကို စာရင်းပြုပြီး အားလုံးကို DNA စစ်မယ်ဗျာ။ အဲဒီအထဲက မြန်မာတိုင်းရင်းသားသွေး..၂၅-% ပါသူ.တွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားအနေနဲ့ လက်ခံမယ်ဗျာ။ မြန်မာသွေး မပါသူတွေကို ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံခေါ်သွားကြေးလို့သာ စိန်ခေါ်လိုက်ပါ။ ဒီဘင်္ဂလီ ကုလိမ်တွေကို ဘယ်ကမ္ဘာကမှ လက်မခံချင်ကြတာပါ။
အဲဒီလိုစိန်ခေါ်လိုက်ရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ ရှိနေတဲ့ တခြားဘင်္ဂလီတွေကပါ ရောဝင်ပြီး ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီး စာရင်းပေးကြပါမယ်။ ဒီဗြောင်လိမ်နေသူတွေ အလွန်ဝမ်းသာသွားပါမယ်။ အားလုံးက ဘင်္ဂလီသွေးဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ် အသိဆုံးလေ။ ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံ မသွားရဘဲ အနောက်နိုင်ငံတွေ သွားရပြီဆိုပြီး ၀မ်းသာလိုက်ကြမှာပါ။ နောက်ဆုံး မြန်မာနိုင်ငံမှာပါ နိုင်ငံသားအဖြစ် တရားဝင် နေထိုင်ခွင့်ရမှာလေ။ ဘင်္ဂလီအလိမ်တွေ သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေ ကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပါ သမတကြီးခင်ဗျား။ စိန်ခေါ်လိုက်မှ ပါးစပ်တွေပိတ်ပါမယ် ။
၂၀၁၂ခုနှစ်ဇွန်လ ၁၇ရက်နေ့က မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမှာ ဆန္ဒပြသူ ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာတဦး ဘယ်ဘက်မှာ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ အသတ်ခံနေရပြီဆိုပြီး ဆန္ဒပြနေတဲ့ ပုံဟာ ၂၀၀၉ခုနှစ်က ဘင်္ဂလီလှေစီး ဒုက္ခသည်များအား အင်ဒိုနီးရှား ကမ်းခြေစောင့်တပ်ဖွဲ့မှ ကယ်တင်လာတဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်..။ မူရင်းလင့်ခ် http://newshopper.sulekha.com/indonesia-myanmar-ships-of-misery_photo_649883.htm
မလေးရှားမှာ အစပိုင်းတုန်းက ဒုက္ခသည်လျှောက်ရင် ရိုဟင်ဂျာဆိုရင် ချက်ချင်းပေး ဦးစားပေးကြတော့ တခြား ဘင်္ဂလီစကားလဲ မတတ် ရခိုင်ဒေသကလဲ မဟုတ်တဲ့ ပြည်မပိုင်းက မွတ်စလင်တွေက လွယ်လွယ်ဘဲ ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီး လိမ်လျှောက်ကြသူတွေ အများကြီး။ ဒုက္ခသည်တော့ ချက်ချင်းရပါတယ်။ မကြာပါဘူး ရိုဟင်ဂျာတွေကို တတိယနိုင်ငံတွေက သိပ်လက်မခံကြတော့ အခုတော့ မလေးမှာတင် သောင်တင် နေကြတော့တာပါ။ တခြား ချင်း/ မွန်/ ကရင်/ ကချင်/ရှမ်း လူမျိုးတွေဟာ တတိယနိုင်ငံတွေက ပိုလက်ခံလာပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဘာလို့လက်မခံတော့ ဆိုတာကိုတော့ သူတို့ပိုသိပါမယ်..။ ကျနော်မသိဘူး။ အနောက်နိုင်ငံတွေ သူတို့တောင် လူနည်းနည်းလေးကို လက်မခံချင်တော့တာ ဘာလို့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံကို ဖိအားပေးချင်ကြတာလဲ။
(၄) အာရပ်ကုန်သည်တွေက ဆင်းသက်လာခြင်း
နောက် ဒီဘင်္ဂလိမ်တွေဟာ သူတို့လိမ်ပြောနေသလို အာရပ်သွေး ပါတယ်ဆိုရင် အာရပ်နိုင်ငံတွေကို သွားတောင်းဆိုပေါ့။ အာရပ်နိုင်ငံတွေကို ကျနော်တို့ဆီမှာ ခင်ဗျားတို့ ဒီအင်အေ သွေးတွေ ရှိနေတယ် သွားပြောပေါ့။ နိုင်ငံသား ခံယူတယ်ဆိုတာ ဖခင်မျိုးရိုးကို ဆက်ခံရတာလေ။ သဘောင်္ပျက်လို့ သောင်တင် လာပြီး ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် အာရပ် အမျိုးသမီး ကုန်သည်တွေ မပါပဲ ဘယ်လိုလုပ် လူဦးရေတိုးပြီး လူမျိုးစု ဖြစ်လာတာလဲ။ သဘောင်္ပင်လယ်ထဲ မျောလာတာ အာရပ်ကုန်သည်မ တွေလို့မှ လိမ်မထားတာ။ နောက်သူတို့ ဘာသာမှာ မိန်းမတွေက ကုန်သွယ် ခရီးထွက်ခွင့် မရှိဘူးလေ။
(၅) ဒီသင်္ဘောပျက် ပုံပြင်လေးကို
အနောက်နိုင်ငံက မီဒီယာကြိးတွေ လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့က ဆရာကြီးတွေကို ပြောလိုပါတယ်။ ဒီဘင်္ဂလီ တွေကတော့ လိမ်ရမှာ တစ်စက်လေးမှ ၀န်မလေးပါဘူး သူတွေဖြစ်တော့ ကြံရာမရ လ်ိမ်မှာဘဲ။ သူတို့ အတွက်လိမ်ဖို့ရာ တစ်စက်လေးမှ ၀န်မလေးသလို မထူးဆန်းပါဘူး။ ပညာကမတတ်တော့ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမရှိကို မသုံးသပ်ဘဲ ပါးစပ်ထဲ တွေ့ကရာတွေ လိမ်လာပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ပညာတွေ တတ်ထားသူတွေ။ ရထားတဲ့ဘွဲ့ ကိုထောက်ထားပြီး ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်လေးလဲယုံကြဖို့ သင့်ပါတယ်။
ကဲဒီ အာရပ်ကုန်သည်တွေ သင်္ဘောပျက်လို့ ဆိုတာကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၁၀၀၀-ကျော် အချိန်ကဆိုတော့ A.D-700-800 ၀န်းကျင်ပေါ့။ ကမ္ဘာ့သင်္ဘော ရေကြောင်းလိုင်း သမိုင်းကို ဘီဘီစီသတင်းဌာနကြိးက မှတ်တမ်းပြုပြီးရုပ်သံလွှင့်ကနေ တင်ဆက်ထားတာကတော့ A.D.-1400-ကျော်ဝန်းကျင်မှာ တရုတ် ရေတပ်မတော်ကြီးတခု အာရေဗျ ဒေသအထိ တစ်ကြိမ် ရောက်လာဖူးကြောင်း တင်ဆက်ထားပြီး ဒီမတိုင်ခင် ပင်လယ်ဖြတ်ကူးမှု အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာဖက်မှာ ကူးလူးတာ မရှိသေးဘူး ဆိုထားပါတယ်။ တရုတ်ရေတပ်ကြီး နောက်ပိုင်း နှစ်တရာကျော်ကြာမှ ပေါ်တူဂီက Vasco da Gama 1497 နှစ်မှာ အိန္ဒိယဘက်ကို ရွက်လွှင့်ခဲ့တာပါ။ သစ်ပင်ရှားပါးတဲ့ အာရပ်ဒေသက လူတွေ ရေကြောင်း မချီနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
နောက် ဘီဘီစီက ဆရာကြိးတွေကို ပြောချင်ပါသေးတယ်။ ဆူမားတြားကျွန်း ဘက်လာတဲ့ အာရပ်ကုန်သည် သင်္ဘောတွေ မုန်တိုင်းမိလို့ ပျက်ပါတယ်ဆိုရင် အဲဒီသင်္ဘောတွေဟာ သီဟိုလ်ကျွန်းဘက်ကိုဘဲ မျောသွားပါမယ်။ နောက်ဆုံး ဆူမားတြား ဘက်ကိုဘဲ မျောသွားပါမယ် ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ခိုလှုံနေထိုင်နေတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့သင်္ဘောလိုင်းတွေ အားထားနေရတဲ့ ပင်လယ်ရေပြင်ကြီး အကြောင်း နှစ်စဉ် ထုတ်ပြန်နေတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ရေကြောင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် ဆော့ဝဲလ်ကိုထုတ်နေတဲ့ Admiralty Digital Publications ADP ကို လေ့လာပါဦး ပြောချင်ပါတယ်။ ဘီဘီစီဌာန မှာ ရှိပါတယ်။ The United Kingdom Hydro lographic Office..Admiralty Way, Tauton, Somerset TA 1 2DN,UK ..( Tel )+44 (0) 1823 723366 email.customservices@ukho.gov.uk ကို ဆက်သွယ်ပြီး သူတို့အမြင် ပညာရှင်စစ်စစ်တွေရဲ့ သဘောထားကို တောင်းခံကြည့်ပါဦးလို့ ပြောချင်ပါတယ် ။
နောက်တစ်ခုပေါ့။ မနှစ်မိုးကုန်စက ဧရာဝတီမြစ်ဝကို လေကြမ်းမွှေလိုက်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ပေါက်မှာ ၀ါးတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကျားဖေါင်တွေ ရခိုင်ဘက်ကို မမျောဘဲ အောက်ဘက် Andaman Islands ဘက်ကို မျောသွားတာ မှတ်မိပါဦးမယ်။ ဘင်္ဂလီတွေ လိမ်ထားတာတွေ ဟုတ်မဟုတ် ပြန်စဉ်းစား ချင့်ချိန်ပါဦး။ ဒေါ်လာမက်ပြီး အဖန်ဖန် ရဲရဲလိမ်နိုင်ရင် အမှန်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ အာဏာရှင်ကြီး ဟစ်တလာ အကျင့်ဆိုးတွေကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာခိုလှုံ ဒီမိုကရေစီ အသံလွှင့်ဌာနကြီးရဲ့ ငွေတွေစားနေပြီး ကပြောင်းကပြန် လုပ်နေတာ အလွန်မှ မသင့်လျှော်ပါကြောင်း။
အခုလဲ ကျနော်တို့ ဧရာဝတီမြစ်ပေါက် အလွန်ကနေ ပစ္စည်းတွေ မျောကြည့်ပါဦး။ ဒီလိုဘဲ ဆူမားတြား ပင်လယ်ကနေလဲ ဆယ်ကြိမ်ဆီလောက် မျှောကြည့်ပါဥိးလို့ စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ ပြောပြန်ရင်လဲ လူစွာလုပ်တယ် ပြောခံရပါဦးမယ်။ ကျနော် အသက်၁၃-နှစ်သား လောက်ကထည်းက လူတိုင်းပြောဆိုနေတဲ့ ပုံပြင်လေးကို ဆန့်ကျင်လို့ ခဏခဏ ပြသနာ တက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဆင်သေကောင်နဲ့ ကျီးကန်းမိုက် ပုံပြင်လေးပါ။ ကျနော်ငယ်ငယ် ပင်လယ်ဘက်ကို မကြာခန ရောက်ခဲ့ဘူးပြီး လူကလဲ လူကြိးတွေကို မေးခွန်းထုတ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရှိတော့ ပင်လယ်ပေါက်ကနေ ဘာပစ္စည်းမှ ပင်လယ်ထဲကို မျောမသွားဘူး ပင်လယ်ပေါက် အနီးမြစ်ပေါက်ဝ ထဲမှာဘဲ တ၀ဲလည်လည် ရှိနေတာဆိုတဲ့ အသိလေး ရလိုက်တော့ ခေါင်းထဲ ဆင်သေကောင်ကြီး ပင်လယ်ထဲ မျောသွားတယ်ဆိုတာ လက်မခံနိုင်တော့ပါဘူး။
(၆) ဗြိတိသျှဂေဇက် မှတ်တမ်းများ
မီဒီယာကြီးတွေ လက်တကမ်းမှာတင် ရှိနေပါတယ်။ ဗြိတိသျှမှတ်တမ်းများမှာ (ဂေဇက်မှတ်တမ်းများမှာ) ဒီဘင်္ဂလီတွေအကြောင်း မှတ်တမ်းတွေ ရေးထားပါတယ်။ သန်းကောင်စာရင်း စစ်ပြီးလူဦးရေ စစ်တမ်းတွ အင်္ဂလိပ် အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်ခဲ့တာတွေ အကုန်ရှိပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်အချိန်မှာ ရှိထားပါတယ်ဆိုတာ ထုတ်ပြန်ပေးပါ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ထားပါဦး။ အလားတူ ဝေါဟာရလေး ရှိတယ်ဆိုရင်တောင် ထောက်ပြပါဦး။ ခင်ဗျားတို့ အသံလွှင့်ဌာနက စာကြည့်တိုက်ကြီးတွေမှာ ရှိပါတယ်။ လက်တကမ်းမှာပါ။
နောက်တကယ်က အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ကြောင့် ရောက်လာသူတွေ ကျနော်တို့က ဗြိတိသျှကိုတောင် မောင်းထုတ်ခဲ့တာ ဒီလူတွေကို ဘာမှလက်ခံနေစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ လက်ခံထားတာကို ကျေးဇူးတင် ရမဲ့သူတွေက အပြစ်တင် ပြသနာ လုပ်တာကိုတော့ ပြန်သုံးသပ်ကြပါဥိး ။
(၇) တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံသား ဖြစ်ပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေး
ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ (တခြားနိုင်ငံရဲ့မူတွေတော့ မသိပါဘူး) တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ဖို့ သတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ဥပဒေနဲ့ အခိုင်အမာ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ပါးစပ်ထဲက ထင်ရာပြောရုံနဲ့ ဒါတောင်းဆိုလို့ ရတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပဒေအတိအကျ ရှိထားပါတယ်။
(က) သီးသန့် ကိုယ်ပိုင် ဘာသာစကား နှင့် (စာပေ)
(ခ) ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု
(ဂ) ကိုယ်ပိုင် ၀တ်စားဆင်ယင်မှု
(ဃ) ကိုယ်ပိုင် ဓလေ့ထုံးတမ်း
(င) ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေ (တစုတဝေးထည်း) ရှေးအစဉ် အဆက်နေထိုင်လာခဲ့တဲ့ အထောက်အထား..
(စ) သမိုင်း အမွေအနှစ် (အထောက်အထား )
(ဆ) တခြားအိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများမှာ ရှိပြီးသားလူမျိုးစု မဟုတ်သူ ဖြစ်ရမည် စတာတွေ အများကြိး တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေဆိုတာ ရှေးအစဉ်အဆက် ကိုယ်ပိုင်သီးခြား လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင်လာခဲ့တဲ့ အထောက်အထား ရှိရပါမယ်။
ရိုဟင်ဂျာဆိုသူ ဘင်္ဂလီတွေမှာ သမိုင်းအထောက်အထား ပြစရာ ရှေးဟောင်းဗလီ ရှေးဟောင်း င်္သချိုင်း တခုမှ ပြစရာမရှိပါဘူး။ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်ဆိုတာ မွတ်စလင်ဘာသာမှာ မရှိလို့မရ ရှိကိုရှိရပါမယ် အလွန်တန်ဖိုး အထွဋ်အမြတ် ထားရတဲ့ သာသနာရေး အဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့ကို ဘုရား-၅-ကြိမ်ဝတ်ပြုရတာမို့ ဗလီဆိုတာ ရောက်လေရာအရပ်မှာ တည်ကြရတာပါ။ ဒီဗလီတွေကို ဘယ်သူမှ ဖြိုဖျက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဖျက်သူကို ဆွေစဉ်မျိုးဆက် သတ်ရတာပါ။ ဗလီကိုမဆိုပါနဲ့ဦး စာရွက်သာဖြစ်တဲ့ ကိုရမ်ကျမ်းစာကို စုတ်ဖြဲရင်လဲ သတ်စေ။ တက်နင်းရင်လဲ သတ်စေလုပ်တာပါ။ နောက်ဆုံး ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ်ကဖတ်ချင်လို့ ကိုရမ်ယူထားမိတယ်။ ဒီကိုရမ်ကို တခြားစာအုပ်တွေ အောက်မှာ ထားရင်ကို ရန်ရှာသတ်ဖြတ်ရမယ်လို့ ညွှန်ကြားထားတာပါ။ ကိုရမ်ဆိုတာ အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ အရာမို့ အရာအားလုံးရဲ့ အထက်မှာ ရိုရိုသေသေထားရပါမယ်။ တခြားအရာတွေအောက် ကြားထဲမှာ သိမ်းထားခွင့် မရှိပါဘူး။ အဲဒီလိုသူတို့ ဘာသာကိုတော့ အမွန်အမြတ်ထားတာပါ။ အဲဒီတော့ ရခိုင်ဒေသမှာ သူတို့ နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ရှေးဟောင်း အထောက်အထား အဖြစ်ပြစရာ ရိုဟင်ဂျာအမည်နဲ့ ကဗျည်းထိုးထားတဲ့ ဗလီ ဘယ်မလဲ။
ဒီလိုဘဲ သူတို့ဘာသာမှာ ဂူသချိုင်းဟာလဲ အလွန်အရေးပါတာပါ။ သချိုင်းဟာ ကမ္ဘာပျက်တဲ့ တနေ့မှာ လူတွေ ပြန်လည်ရှင်ပြန် ထမြောက်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြသူတွေမို့ သချိုင်းကို မဖျက်ဆီးရသလို အင်မတန် အရေးကြီးသော မှတ်တိုင်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဘဲ ဗလီတွေကိုလဲ သက်တမ်းကြာလေ တန်ဖိုးထားလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီတွေ ဘယ်မလဲ ရှေးအစ္စလာမ် သချိုင်းတွေ။
တဆက်ထဲ တကယ်လို့ သူတို့လိမ်ထားသလို ဘင်္ဂလီမွတ်စလင် ဘုရင်တွေ အုပ်ချုပ်ခဲ့ရိုးမှန်ရင် ကနေ့ အင်ဒိုနီးရှား ပါကစ္စတန် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ တွေမှာလို ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားစေတီတွေ ကွယ်ပျောက်သွားသလို ကနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ်က ရှစ်သောင်းဘုရားကြီးက အုတ်တွေဟာ ဗလီဖြစ်သွားတာ ကြာပါပြီ။ ရှစ်သောင်းပုထိုးတော်ကြီးဆိုတာ ကျနော်တို့ မြင်ဖူးလိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အခုမှ ဖုတ်ပူမီးတိုက် ရိုဟင်ဂျာစကား ရှာကြံနေကြရတုန်းပါ။ လောလောဆယ် ပြောနေကြ ဆက်သွယ် နေကြရတာက မိခင်ဘင်္ဂလီစကား။ ပိုဆိုးတာက အခုမှ ရောမအက္ခရာနဲ့ ဘင်္ဂလီအသံကို စာပေလုပ်ဖို့ ကြံဆနေကြတုန်း။ ရီစရာကောင်းသလို သနားဖို့လည်း ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စကား ကိုယ်ပိုင်စာပေမရှိဘဲ သမိုင်းကိုချီ ပြောနေကြတာ။ အာရပ်တွေသာ သိရင်ပါးရိုက်ခံရမယ်။ အာရပ်ဆိုတာ ရှေးနှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀-ကျော်ကထည်းက စာနဲ့ပေနဲ့ ရာဇ၀င်ကြီးခဲ့သူတွေက ဆင်းသက်လာတယ် လို့လဲ လိမ်သေးတယ်။ အခုစကားရော စာပေရောမရှိဆိုတော့ ဘယ်လို အာရပ်တွေပါလိမ့်။ မင်းတို့ကြောင့် အာရပ်တွေပါ စာပေမရှိတဲ့လူတွေ ဖြစ်ရပါတော့မယ်။ အာရပ်သွေးပါရင် မိခင်အာရပ် (အာရဗီ စာပေ) ဟာသူတို့ အလွန်အမွန်အမြတ် ထားတဲ့စကားပါ။ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်ခြင်း အတူတူ အာရဗီစကား စာပေတတ်သူကို ဦးညွှတ်ရတာပါ။ အာရဗီစာပေတတ်မှ ကိုရမ်ကို ပြည့်ပည့်၀၀ နားလည်တယ်လို့ ဆိုထားတာပါ။ အခုတော့ ရိုဟင်ဂျာစာပေဆိုပြီး အစ္စလာမ်ရဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး ရန်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရောမအက္ခရာကို အစ္စလာမ်ရိုဟင်၈ျာ အက္ခရာလုပ်ဖို့ ကြံစည်နေတာ ပြန်စဉ်းစားကြပါဦးလို့ ။
မလေးရှားမှာ အင်ဒိုနီးရှားမှာ မူလစာပေတွေရှိပေမယ့် အင်္ဂလိပ် /ဒတ်ချလ်မျိုးတွေ လွှမ်းမိုးလို့ စာပေမခိုင်မာတဲ့ တချို့ စာပေတွေ ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် အင်္ဂလိပ်တက်တုန်း စာပေပါ ကျွန်ပြုခံလိုက်ရပါတယ်။ အခုဒီဘင်္ဂလိမ်တွေကြမှ သမိုင်းရန်သူဖြစ်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်ပြန်သွားတာ အနှစ် (၇၀)လောက်ရှိမှ အဖေလိုက်ခေါ် နေရာရောက်နေပါပြီ။ သနားတယ်ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာပါ။
(ခ) သီးသန့် လူမျိုးစု
အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံကရှိနှင့်ပြီး လူမျိုးစု မဖြစ်ရဆိုထားတော့ မင်းတို့မိခင်သွေး ဘင်္ဂလီသွေးတွေ ကုန်အောင် ဖေါက်ထုတ်လိုက်ပါဥိး။ ဒီအင်အေ အစစ်ခံရဲတဲ့သူ ရှိရင်ထွက်ခဲ့စမ်းပါ။ ဘင်္ဂလီသွေးဖြစ်နေရင် ကျနော်လိမ်တာပါ ၀န်ခံရပါမယ်။ အခုဒီဘင်္ဂလီ ခေါင်းဆောင်တဦးက အမေရိကန်မှာ ဒေါက်တာဘွဲ့ ရထားပြီး DNA စစ်တဲ့ကိစ္စ ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ DNAဟာ အလိမ်အညာတွေ ထအော်တော့တာဘဲ။ အမေရိကန်ကဘွဲ့ ရထားတာကို အားမနာနိုင်တော့ဘူး။ DNA ဆိုလိုက်တာနဲ့ တီကောင်ကို ဆားတို့တာထက် ပိုပြီး အက်စစ်နဲ့တို့ သလိုကို လန့်နေတော့တာပါ ။
အထက်မှာ ရေးထားပြီး။ အခုမှ ရန်သူရောမကို အင်္ဂလိပ်ကို အဖေခေါ်ဖို့ ကြံဆနေကြတုန်း။ ကနေ့ အထိတော့ ပြစရာ ရိုဟင်ဂျာ စာပေမရှိသေးဘူး။
ဒါကတော့ တီထွင်ဖို့ သိပ်မခက်လှပါဘူး။ အခုတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ တထေရာထည်း ဖြစ်နေတာလေး လောက်တော့ အမြော်အမျှင်ရှိရှိ ကြိုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေလုပ်ပြီး ရထားတဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့ တွေမှအားမနာဘူး။ ကိုယ်ပိုင် အ၀တ်အစားလေးလောက် လုပ်ထားရမယ်ကို မသိကြသူတွေ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အ၀တ်အစားကိုပဲ ဝတ်ဆင်နေကြတာပါ။
(င) ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် ဓလေ့ထုံးတမ်း
ဘာရှိလဲ။ ဓလေ့ထုံးတမ်းနဲ့ ပြောကြရရင် ရခိုင်လူမျိုးတွေမှာ မြန်မာ (ဗမာလူမျိုး) တွေထက်တောင် ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ ရိုးရာပွဲသဘင်တွေ များပါသေးတယ်။ သူတို့မှာ ဘာရှိသလဲ။ သိပါရစေ..